Fikarohana momba ny firaisana Kevin Ryerson, ny Fanahy Ahtun Re sy ny Terak'i Général Général de J Adams, miaraka amin'i Robert Morris | Shirley MacLaine raharaha momba ny fiainana an-davanandro - Fikarohana momba ny fanambadiana vatana
Fampahafantarana an'i Kevin Ryerson, ny Fanahy Mpitarika Ahtun Re & Filoha John Adams naroso ho amin'ny vatana vaovao indray
Famakiana: John Adams: Antoko anankiray
Fitsangatsanganana dokotera mankany amin'ny fiainana taloha
Ny fomba niheverako ny fikarohana momba ny fiterahana indray ao amin'ny vatana dia ny hoe ao amin'ny 1984, eo am-pandehanana dia nandeha tamin'ny lohahevitra iray aho, toy ny iray Penney Peirce nandeha hijery. Fotoana nanatrehako fampiofanana ara-pitsaboana tany Chicago, Illinois. Nisy namana iray niantso ahy ary nanolo-kevitra fa manana fotoam-pivoriana miaraka amin'ny medy iray aho izay niasa tao amin'ny trano fivarotana metafysika teo an-toerana.
Ny maha-skeptika ahy dia tsy nieritreritra mihitsy aho hoe handeha ho any am-piadanana. Efa ririnina somary hafahafa izany, saingy tsy dia nisy afa-tsy ny fianarana, ary nihevitra aho fa mety hisy fotoam-pivoriana iray izay mety ho, raha tsy misy zavatra hafa, mahaliana.
Nandritra ny fotoam-pivoriana, niditra tao anatinà toe-tsaina nisaintsaina ny fampahalalam-baovao ary raha nanao izany izy dia namela ireo mpitari-dalana ny fanahy hiresaka taminy. Ireo torolalana ireo dia nilaza tamiko momba ny olana ara-pianakaviana amin'ny fahamendrehana mahagaga.
Ireo mpitarika dia nilaza tamiko mikasika ny fiainan'ny olona roa taloha, ny iray tamin'izy ireo dia nandritra ny Revolisiona Amerikana. Raha fintinina dia nolazainy tamiko fa i John Adams, Revolisionera Amerikanina izay lasa filoha lefitra voalohany, teo ambany fitarihan'i George Washington, avy eo ny Filoham-pirenena faharoa any Etazonia. Nandre aho fa matetika ny tsikombakomba dia milaza amin'ny olona hoe olom-boafidy izy ireo taloha, satria izany no tian'ireo mpanjifany handre. Tsy nahita aho fa mety ho Adams aho, noho izany tao amin'ny 1984, navako ny fampahalalam-baovao ho fihomehezana ary tsy nanenjika ny fifandraisana Adams nandritra ny 12 taona.
Hafatra momba ny televiziona manaitra
Tamin'ny faran'ny 1995 dia nirotsaka tanteraka tamin'ny asan'ny mpitsabo aho ary nanao dia lavitra tany Hawaii. Izaho dia niasa tamin'ny talen'ny fitsaboana tao amin'ny orinasan-tsolika iray antsoina hoe Unocal 76, izay ny teny filamatra natao hoe "The Spirit of 1776," izay miresaka momba ny fanahin'ny Tolom-piavotana Amerikanina. Tokony ho tamin'ny ora fisakafoanana antoandro izany ary nijoro tao amin'ny tranon'ny Unocal iray tao Honolulu aho niandry mpiara-miasa sasany. Avy amin'ny manga, na aiza na aiza, nahazo baiko anaty toa ny mbola tsy nisy hatrizay aho. Nisy feo niroborobo tato an-dohako nandidy hoe:
“Halalino ny androm-piainan'i Adama”
Tsy mbola naheno feo miavaka tahaka ny teo aloha aho hatramin'izao, na mbola tsy hatramin'izao. Ny hafatra nampitaina tamin'ity feo ity dia mafy orina sy tsy azo lavina, ary matanjaka loatra ka nitondra ahy tany amin'ny trano fivarotam-boky tao Honolulu tamin'io hariva io, izay nividianako boky momba ny Revolisiona Amerikana sy John Adams.
Tao amin'ny fivoriana tao amin'ny 1984 dia nilaza ireo mpitari-dalana ahy fa raha manadihady an'i John Adams aho, dia hahita ny toetrako, ny toetrany ary ny fahazarako. Raha mamaky mikasika an'i Adams aho amin'ny alàlan'ny 1996, dia izao no hitako. Nanana an'io toetra io aho, hery sy fahalemena mitovy ihany koa, ary tamin'ny sary sasany, toy ny nataon'ilay valandresaka momba ny fandriampahalemana tao Paris taorian'ny Ady Revolisionera, dia nanana endrika mitovy amin'i Adams aho. Apetraho eo amin'ny sary ny cursor anao mba hanitarana ny sary sy ny bokotra arrow izay hivezivezy eo amin'ny sary.
Rehefa nandeha ny fotoana dia namantatra ireo olona 60 aho izay nifaneraseran'i Adams, izay toa nanjary reincarnated manodidina ahy nandritra ny androm-piainako. Ohatra, i George rahalahiko dia niseho tamin'ny nahaterahan'i Jesoa Kristy, rahalahin'i John Adams. Ny endriky ny endrika, ary ny toetrany manokana, dia tsy miova.
Nieritreritra aho fa ny rahalahiko iray hafa, Leo, izay mpandidy orthopedic, dia ny vatana vaovao ao amin'ny Cotton Tufts, izay mpitsabo ihany koa ary namana akaiky ny fianakavian'i Adams, izay nitantana ny volan'ny Adams rehefa nandeha tany ampitan-dranomasina izy ireo. Leo no nitantana ny volan'ny reniko talohan'ny nahafatesany.
John Adams, Filoham-pirenena Amerikana, Trangam-pokonolona
Nandritra ny roa taona, dia nanomboka nieritreritra aho fa tsy ho ela dia hiteraka ny vatana vaovao indray andro any John Adams.
Ny antony iray dia ny fisehoan-javatra miavaka sy tsy mahazatra izay niseho tamiko raha oharina amin'i Adams. Nisy hetsika tsy mahazatra toy izany ka nahitana tranganà xenoglossy.
Tafiditra amin'izany ny namana Rosiana iray antsoina hoe Igor, izay nipetraka tany San Francisco ihany koa. Tao amin'ny fianarako an'i Adams, nanamafy aho fa i Frantsa i John Adams izay nahafantatra an'i John Adams, fony Adams dia Amerikana ambasadaoro tany Frantsa. Rehefa nihaona voalohany izahay sy Igor, dia tonga mpinamana vetivety izahay, mahazatra ny mitranga rehefa mahita ny mpiray tanindrazana avy amin'ny fahazoana ny fiainana vaovao. Igor dia nitovy tamin'ny an'ny Frantsay ary nifampizara toetra izy ireo. I Igor sy ny Frantsay dia samy tia mozika ary mitendry zavamaneno. Igor dia nampiofana ho pianista mpihira tany Rosia ary taorian'ny nifindrany tany Etazonia, dia nilalao ho an'ny orinasa lehibe ballet ao New York izy. I Igor sy ny Frantsay koa dia samy nandray fepetra amin'ny vola. I Igor, raha ny marina, dia mampivelatra ny fiainany amin'ny tsena.
Hafatra momba ny Telepathic manambara ny raharaha Xenoglossy: Teny tsy fantatra
Na dia mpinamana akaiky aza i Igor dia tsy nilaza taminy ny momba ny fiainany frantsay taloha aho nandritra ny herintaona mahery, satria tsy mpino an'Andriamanitra i Igor ary fantatro fa tsy nino ny vatana vaovao indray izy. Indray hariva, tao amin'ny efitranon'i Igor aho, nipetraka tao an-dakozia niaraka tamin'i Igor sy ny sakaizany vaovao, Holly. Niaraka nandritra ny enim-bolana teo ho eo i Igor sy Holly, saingy nipetraka tany Seattle izy, ka io no fotoana voalohany nihaonako taminy. Avy amin'ny manga, nahazo fahatsapana miavaka aho, izay toa hafatra telepathika. Raha ny marina, ny fomba tsara indrindra azoko faritana momba izany dia ny niainako ny “feo tsy misy feo”, teny nampiasain'i Neale Donald Walsh tao amin'ny andiany boky, Conversations with God. Na dia tsy fantatro aza hoe avy aiza ilay feo tsy misy feo, dia nanao izao fanambarana manaraka izao izy:
Lazao azy izao, lazao azy ireo izao. ”
Fantatro avy hatrany fa ny feo tsy misy feo dia te-hilazana amin'i Igor sy Holly momba ny fiainako taloha Igor aho tamin'ny naha-frantsay ahy, na dia tsy azoko hoe nahoana aho no tokony hiteny amin'i Igor amin'izao fotoana izao. Niady hevitra tamin'ity feo tsy nampoizina ity aho, ary nieritreritra tao am-poko hoe: “Fa maninona no holazaiko amin'izy ireo izao? Afaka nilaza tamin'i Igor aho herintaona lasa izay. Ankoatr'izay dia tsy hino an'izany mihitsy izy. ” Tsy nisy na kely aza, nanaraka ny torolalan'ilay feo tsy misy feo aho. Noteneniko tamim-pihambahambana tamin'i Igor sy ny sakaizany ny fahatsapako fa nahafantatra an'i Igor tamin'ny vanim-potoanan'ny revolisionera aho ary frantsay izy. Ny fampitahana sary misy an'i Igor sy ny lalao taloha natolony dia omena ankavanana.
Xenoglossy: Niresaka tamin'ny teny frantsay i Igor tamin'ny torimasony
Namaly i Holly sakaizany avy eo, “Zazalahy hafahafa izany, satria miteny frantsay i Igor rehefa matory.” Nanamafy i Igor fa marina izany. Notantarain'i Igor fa efa nilazana imbetsaka izy fa miteny frantsay amin'ny torimasony ary niaiky izy fa tsy nianatra teny frantsay mihitsy. Igor dia tsy afaka miteny frantsay amin'ny fahatsiarovany tena. Mazava ho azy, Igor satria atheista misy azy, tsy niraharaha an'io fisehoan-javatra io na ny fomba mety hitrangany.
Tara aho! Ity dia misy tranga iray xenoglossy, izay ahafahan'ny olona miteny fiteny iray izay tsy nianarana mihitsy. Ny zavatra nahagaga dia ny nanohana ny fehin-kevitro momba an'i Igor sy ny fikarohana momba ny fiainana taloha an'i Adams tamin'ny ankapobeny. Toa nanosika ahy hilaza tamin'i Igor momba ny fiainany frantsay teo imason'ny sakaizany ilay feo tsy nisy feo, mba hahafahany mitory ny fahaizany miteny amin'ny alina amiko. Raha tsy izany, mety tsy mbola nahalala momba ny xenoglossy an'i Igor aho.
Ankoatra izany, dia nisy tranga hafahafa hafa sy nifanintona nitranga tamiko izay toa nitantara ny fiainany taloha toa an'i Adams, izay notantaraina tamin'ny antsipiriany tao amin'ny toko farany amin'ny bokiko Fiverenan'ny revolisionera, izay manan-kery, Siansa ara-panahy sy fanavaozana vaovao. Raha marina ny raharaha momba ny fanambadiana zanako vao teraka, dia nihevitra aho fa mety ho sarobidy ny fampahalalana momba ny fomba fiasan'ny vatana vaovao, nefa tsy fantatro izay tokony hatao amin'ny fampahalalana. Talohan'ny taona 2000, azo antoka fa tsy vonona ny handeha am-pahibemaso aho. Na izany aza, dokotera aho nanao salanisa tsara. Tsy te hamoy ny asako aho amin'ny fihazakazahana milaza fa i John Adams, raha tsy izaho. Mila karazana fanamarinana na fanamafisana aho.
Fitsidihana Psychics: Fampidirana an'i Kevin Ryerson & the Spirit Being or Spirit Guide Ahtun Re
Tsy fantatro hoe inona no tokony hatao, dia nanomboka nieritreritra aho tao amin'ny faritr'i San Francisco, izay toerana niainako, izay nanana laza tsara, mba hahitana izay holazainy. Ohatra, nitsidika ahy aho Michael Tamura, izay nitarika ny Ivontoeran'ny Berkeley Psychic nandritra ny taona 20. Amin'io toerana io dia nampiofana mpitaiza hafa izy, ka noho izany dia mety ho loharanom-pahamendrehana azo antoka izy. Nandritra ny fotoam-pivoriana niaraka tamin'i Michael dia nilaza izy hoe: "Eny, ianao no John Adams ary eto ianao mba hitondra ireo Rain'ny Mpanorina." Tsara ilay izy, saingy mbola tsy resy lahatra aho. Nankany amin'ny fitsaboana marobe hafa aho ary nilaza tamiko daholo izy rehetra fa lasa teraka tamin'ny taon-dasa indray i John Adams. Mbola nanadihady ny fahamarinan'izy ireo aho ary niahiahy fa mety hilaza amiko ny zavatra tiany ho reko.
Nandritra ny fitsidihako nandritra ny androm-pandrosoana, dia niresaka tamin'i Kevin Ryerson aho, izay niasa niaraka tamin'i Shirley MacLaine nandritra ny 30 taona na mihoatra ary izay hita ao amin'ny boky efatra.
Nianarako fa i Kevin dia fantsom-pandraketan-tserasera, midika izany fa rehefa mandeha izy, dia miditra amin'ny fisainana na trance izy ary mamela ny fanahy hiteny amin'ny alalany.
Ny Torolalana ho an'ny Fanahy na ny Fanahy Ahtun Re
Ny fanahy izay nanombohako niasa tamin'ny alalan'i Kevin dia antsoina hoe Ahtun Re, izay manondro ny tenany ho Ejiptiana avy amin'ny Nubia. Nanazava i Ahtun Re fa niorina nandritra ny androm-piainan'ny olombelona izy ary niakatra, toy ny Bouddha, Jesosy, Mohammed ary ireo mpampianatra ara-panahy hafa. Ny nahaterahan'i Ahtun Re farany, hoy izy tamiko, tany Ejipta, nandritra ny fitondran'ny Farao Akhenaton (1379-1362 BC), fantatra amin'ny anarana hoe "Rain'ny Monotheisma." Ahtun Re dia Mpisoronabe sy mpanolotsaina ho an'i Akhenaton ary toy izany, ny nahaterahan'i Ahtun Re dia ny manodidina ny 3350 taona lasa izay.
Ny resaka amin'ny torolalan'ny fanahy Ejiptiana izay efa maty nandritra ny taona 3000 dia tantara niainana ho ahy. Nanolo-tsaina aho, saingy tsy nino, ary tany am-piandohana dia tsy nihevitra aho fa marina i Ahtun Re. Tahaka ny olona mahay mandanjalanja, indrindra indrindra fa satria ny siansa no nahalalako ny siansa, mila porofo aho fa resy lahatra aho fa namoaka vaovao marina i Ahtun Re.
Famerenana ny toe-javatra iainana teo aloha tamin'ny Revolisiona Amerikana
Voalohany indrindra, Ahtun Re dia nanamafy ihany koa fa izaho no voholana vaovao indray ny an'i John Adams. Naveriko avy eo ny lisitr'ireo lalao efa ho 60 izay efa niainako nandritra ny androm-piainana izay nieritreretako momba ny vondrona izay nanjary manodidina an'i John Adams, izay noheveriko fa voamariko tamin'ny vanim-potoana ankehitriny. Raha nandia ny lalao tsirairay izahay, dia nilaza tamiko i Ahtun Re raha marina aho na diso. Amin'ny ankapobeny, nanamafy ny momba ny 85 isan-jaton'ireo lalao izay noeritreretiko izy ary nilaza fa tsy marina ny 15 isan-jato. Maro ny tranga Amerikana Revolisiona momba ny fiainam-piainana nohamarinin'i Ahtun Re hita ao amin'ny tranonkala Reincarnation Research. Mba hahalalana bebe kokoa:
Ny tsy fahamendrehan'ny fiainana teo aloha dia mampiaiky fa Walter Ahtun Re dia fanahy iray misaraka amin'i Kevin Ryerson
Na izany aza, tsy azoko antoka raha misy antony tokony hametrahana fitokisana an'i Ahtun Re. Ahoana no nahafantarako fa marina ny fanapahan-keviny?
Nisy ny fandrosoana nitranga rehefa nanomboka nanontany momba ireo lalao izay tsy nahitako fifanakalozan-kevitra aho ary nanontany an'i Ahtun Re aho mba hilaza amiko hoe iza ny olona iray tamin'ny andro niainany, na iza ny olona avy amin'ny tantara amin'izao vanimpotoana izao. Ny zavatra hitako dia ny hoe Ahtun Re dia afaka mametraka ny famantarana momba ny fiainana taloha, izay hita fa marina sy marina. Ny lalao nataony, rehefa nanadihady, dia naneho ny endrika endriny, ny toetra maha-olona, ​​ny talenta ary ny vondrona karmika mifanaraka amin'izany.
Ankoatr'izay, indraindray dia tafiditra ao anatin'ny tantara izay tsy dia mazava loatra sy sarotra ny fampahalalam-baovao, fa tsy misy fomba ahafahan'i Ahtun Re (na Kevin Ryerson ho amin'izany resaka izany) raha tsy mahazo loharano ara-tsiantifika tahirin-kevitra. Ny sasany mety hiantso ity loharanom-baovao ity ny rakitra Akashic, ny sasany mety hiantso azy hoe Universal Mind.
Ireo Core fototra izay maneho ny fahaizan'ny fanahy ho Ahtun Re ny mamaky ny firaketana Akashic na ny eritreritra eran'izao tontolo izao
Ny sasantsasany amin'ireo tranga izay maneho mazava ny fahaizan'i Ahtun Re amin'ny fanaovana ny lalao mialoha ny fiainany dia ahitana ny an'ny mpifaninana Amerikana Green 2000 ho an'ny Filoha, Ralph Nader, astronoma Carl Sagan, Neale Donald Walsch, mpanoratra ny Resadresaka miaraka amin'Andriamanitra andiam-boky, ary ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao any Laurel sy Hardy. The Laurel & Hardy | Ny tranga Reincarnation an'ny Bacher Boys dia matanjaka be koa. Ireo tranga ireo dia aseho ao amin'ny fizarana: Tranga lehibe izay mampiseho ny fahaizan'i Ahtun Re
Tahiry Fahalalana Rakipahalalana Encyclopédic an'ny Spirit Being Ahtun Re: Mialoha an'i Google
Tokony hotadidintsika fa rehefa nanomboka niara-niasa tamin'i Kevin aho tamin'ny 2001, ny motera fikarohana, toa ny Google, dia taloha ary tsy nampiasaina mahazatra. Rehefa nanome ahy vaovao momba ny fikarohana i Ahtun Re dia tsy maintsy nataoko tamin'ny fomba taloha izany tamin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny tranomboky sy amin'ny famakiana boky. Noho ny voafetra ny fahazoana mombamomba izany fotoana izany dia tonga saina aho fa ny tahirim-pahalalan'i Ahtun Re dia mihoatra ny azon'i Kevin Ryerson atao. Araka ny nanamarihana ireo tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao hafa misy an'i Penney Peirce, dia toa manana fidirana amin'ny fampahalalana amin'ny rakipahalalana momba ny rakipahalalana ny mpampita vaovao antsoina hoe Bobby Jo. Toy izany koa, Ahtun Re dia toa nanana fahalalana fa mihoatra ny fahafahan'ny olombelona tokan-tena.
Ny Torolàlana ho an'ny Fanahy MacPherson dia mandinika an'i Walter Shirley MacLaine & Walter avy amin'ny tontolon'ny fanahy
Alohan'ny handehanako ny famoahana ireo tranga novelabelarina tamin'ny Ahtun Re, te hizara angano iray aho izay mampiseho fa ny fanahy dia mitarika fa afaka manara-maso ny hetsika ety an-tany ny fahitalavitra Kevin. Ao amin'ny bokiko, Fiverenan'ny revolisionera, I Shirley MacLaine dia fantatra amin'ny anarana hoe James Wilson, Amerikana Revolisionera ary nanasonia ny fanambarana ny fahaleovan-tena, lalao nampahafantaran'i Ahtun Re. Madlaine dia nankasitraka tokoa ny nanaiky ny ho ao amin'ny bokiko, na dia tsy nanana fahafahana hanatrika fivoriana miaraka amin'i Kevin aza izy talohan'ny famoahana ny bokiko mba hanamafisana mivantana an'io andro farany io.
Ny Robert Morris | Shirley MacLaine Reincarnation Case
Volana vitsivitsy taorian'ny namoahana azy Fiverenan'ny revolisionera, Ramatoa MacLaine dia nitarika atrikasa maromaro tamin'ny oktobra 2003 tao amin'ny Academy of Art College, tao San Francisco. Fotoana nahafahako nihaona tamin'i Ramatoa MacLaine voalohany. Tao anatin'ny volana taty aoriana dia tsapako tamin'i Kevin fa i Shirley dia nanao fivoriana niaraka taminy sy Ahtun Re. Mandritra izany, nanonona an'i Robert Morris | i Shirley | Shirley MacLaine momba ny vovoka momba ny vovoka ao amin'ny bokiny Mihoatra izany rehetra izany aho: Sy ny fiaiken-keloka hafa.
Ny Fanahy Ahtun dia manome soso-kevitra ho an'i Shirley MacLaine
Izaho mihitsy no nahazo ny fivoriana an-tariby niaraka tamin'i Kevin Ryerson nomanina ny andro alohan'ny hetsika Shirley. Kevin nitarika ny fivoriana tao Portland, Oregon, izay toerana niainany tamin'izany fotoana izany. Tao amin'ny fivoriana dia nanontaniako i Ahtun Re na hitondra fanomezana ho an'i Shirley aho. Ahtun Re, niteny tamin'ny alalan'i Kevin tao anatin'ny feony lalina mafy, nilaza tamiko fa manana T Shirt aho izay namorona ny endriky ny revolisiona Shirley teo anoloana, miaraka amina lohateny hoe:
"Amin'ny fiainako manaraka dia te-ho Shirley MacLaine aho."
Tao ambadiky ny T Shirt, Ahtun Re dia nilaza tamiko fa tokony hanoritra ity andalana manaraka ity aho,
"Olona enina zato sy izay azoko rehetra dia ity T-shirt maingoka ity."
Ahtun Re dia tsy vitan'ny hoe afaka manao ny lalao misy fiainana efa lasa, fa manana vazivazy ihany koa izy. Eny ary, tamin'ny fomba mahagaga dia afaka nahazo ny T Shirt natao tamin'ny iray andro aho ary nanana izany niaraka tamiko rehefa nandeha nijery an'i Shirley aho. Taorian'ny fivoriana maraina dia nampahafantatra ny tenako tamin'i Shirley aho tamin'ny fiatoana antoandro. Tsy niomana amin'izay zava-nitranga taorian'izay aho. Tamin'ny fiantombohan'ny fivoriana tolakandro, nanasa ahy hiaraka aminy i Shirley.
Walter Nervous On Stage niaraka tamin'i Shirley MacLaine ary nandalo ny Mikrôhina toy ny Baton
Nandritra ny adiny roa teo ho eo, nisy resaka nifanaovana teo anelanelan'i Shirley, ny mpihaino azy roa ka hatramin'ny telonjato lahy sy ny ahy, momba ny vatana vaovao, ny bokiko sy ny fiainany taloha tahaka an'i Robert Morris. Na dia teo aza ny fotoana niainako, dia sahiran-tsaina aho ny hiaraka amin'ny iray amin'ireo olo-malaza malaza indrindra eto an-tany. Natosiky ny tanako havanana ny fanahiako, izay nitana ny mikrôfo. Nahazo ny mikrôhô ny tanako tamin'ny hery lehibe kokoa sy lehibe kokoa mandrapaha-manomboka tsy mitsahatra. Tamin'izany fotoana izany, mety efapolo minitra nidinam-pandehanana, nandalo ny mikrôka teo an-tanako havia aho. Rehefa afaka kelikely, dia nanomboka niondrika ny tanako havia, ary tsy maintsy namindra ny mikrôty teo an-tanako havanana aho. Izany dia nandalo ny vaton'ny mikrôphônes nanohy nandritra ny faharetan'ny endriky ny sehatra niaraka tamin'i Shirley, izay, araka ny nanamarihana, dia naharitra adiny roa teo ho eo.
Spirit Being MacPherson dia mandinika an'i Shirley & Walter avy amin'ny tontolon'ny fanahy
Ny tena mahavariana momba ity raharaha ity amin'i Shirley dia ny fitarihan'ny fanahy masina an'i Kevin Ryerson no nijery ny fizotry ny tontolon'ny fanahy. Tadidio fa tany Portland i Kevin raha niseho tao San Francisco ny hetsika niaraka tamin'i Shirley. Volana maromaro taorian'ny nanaovan'i Shirley Akademia momba ny Art College College, dia tonga tany San Francisco i Kevin Ryerson mba hanao famelabelarana sy fanehoan-kevitry ny vahoaka momba ny fandalovana. Tao amin'ny fivoriana, nisy torolalana hafa notarihin'ny alalan'i Kevin, Tom MacPherson, nandeha. Matetika i MacPherson no nanatrika fivoriana ho an'ny Shirley MacLaine, tahaka ny nataon-dRtoa Tom farany tamin'ny maha-mpilalao azy tao amin'ny troupan'i Shakespeare, noho izany dia miahy ny fisian'ny tantara izy sy i Shirley. Tom, tamin'ny alalan'i Kevin, dia niresaka tamin'ny mpihaino tamin'ny teny italiana azy ary niantso ahy izy. Nanontany i Tom hoe: "Ka, Laddy, nanam-potoana nahafinaritra tamin'ny lohanao ve ianao?"
Ny mofomamy izay niresahan'i Tom, mazava ho azy, dia i Shirley MacLaine. Namaly aho fa nanana fotoana nahafinaritra teo amin'ny sehatra niaraka tamin'i Shirley aho. Tom tamin'izany dia nanamarika hoe:
"Reraka be ianao, kanefa, mandalo amin'ny mikrôhôka amin'ny tanana iray mankany amin'ny iray hafa."
Gaga aho rehefa nilaza an'io fanambarana io i Tom, araka ny tsy nolazain'i Kevin tamin'ny tranga mikrô. Taorian'ilay fanadihadiana, nanamafy i Kevin fa tsy fantany ny olana aterak'io mikrôhôfa io raha teo am-pandehanana niaraka tamin'i Shirley aho. Izany no nahatonga ahy hahatsapa fa afaka manara-maso ny hetsika ety an-tany ny mpitarika Kevin, na aiza na aiza toerana misy an'i Kevin tenany.
Ry namako malala ao amin'i Kevin Ryerson & Fanahy maha-Ahtun Re
Nandritra ny taona maro izay niarahako niasa tsy tapaka tamin'i Kevin hatramin'ny nahitanay voalohany tamin'ny Oktobra 2001 ary lasa mpinamana be izahay. Ankoatr'izay, satria efa nanao fivoriana isam-bolana niaraka tamin'i Kevin hatramin'ny 2001 aho, dia mahatsapa ihany koa fa namako i Ahtun Re. Ao anatin'ireo fotoam-pivoriana, Ahtun Re dia mafana sy olona toy ny olon-kafa rehetra azonao resahina amin'ny telefaona. Ny hany maha samy hafa azy dia ny amin'i Ahtun Re, ny telefaona dia i Kevin Ryerson. MacPherson koa dia tonga tamin'ny fotoana maromaro, saingy i Ahtun Re no mpitari-dalana fanahy lehibe niarahako niasa. Ahtun Re sy MacPherson dia samy manana ny toetrany, izay samy hafa be amin'ny toetran'i Kevin.
Tiako koa ny hilaza fa tsy izaho irery no nanana traikefa tena tsara tamin'ny fampahalalana azon'i Kevin Ryerson. Ohatra, William H. Kautz nahazo Doctorat momba ny siansa tao amin'ny Massachusetts Institute of Technology (MIT) ary mpahay siansa mpiasa tao amin'ny Stanford Research Institute (SRI) nandritra ny 35 taona. Dr. Kautz dia nanoratra boky maro momba ny lohahevitra momba ny intuition ary mihevitra an'i Kevin Ryerson ho iray amin'ireo intuitives marina indrindra nianarany izy. Amin'ity fampidirana ity dia andao hodinihintsika ireo tranga voavaha tamin'ny alàlan'ny Ahtun Re:
Mandeha: Tranga goavambe izay mampiseho ny fahaizan'i Ahtun Re manao mifanaraka amin'ny fiainana taloha
Manana fivoriana miaraka amin'i Kevin Ryerson, mankanesa any: Kevin Ryerson Tele-Readings